Gormeet ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Gormeet ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ Co. ,,ltd has been manufacturing blow molding products over 25 years in South of China, we owned two blow molding factories withatotal of 50 blow molding machines from small size to extra large size. We are sure we could serve customers with enough capacity, short lead time, competitive cost, and better quality.
Gormeet အခြားမည်သည့်ထိုးနှက် molder ထက်ပိုစျေးကွက်များတွင်ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထိုးနှက်တန်ဆာထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်တယ်။ ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းများစျေးကွက်အတွက်ထိုးနှက်တန်ဆာဖြေရှင်းချက်ပေးနိုငျသောအတှေ့အကွုံနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်နှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာများရှိသည်:
ကျနော်တို့ tool ကိုအမှုပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထုတ်လုပ်ကြ Hardware- ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်း Stanley, Black & နှစ်ထပ်၏ရွှေပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်။
-Traffic safety- Delineators, Cone, အတားအဆီးတွေ
-Sports & အပန်းဖြေ။
-Lawn & ဥယျာဉ်
မဆိုဖောက်သည်သို့မဟုတ် Semi-ဖောက်သည်တောင်းဆိုချက်ကို, ထိုးနှက်တန်ဆာပလပ်စတစ် tool ကိုအမှုပေါင်းနှင့်ထုံးစံထိုးနှက်တန်ဆာထုတ်ကုန်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုသင်၏စီမံကိန်းမဆိုဇာတ်စင်မှာသငျသညျတခုပိုင်ဆိုင်မှုရှိလိမ့်မည်။
ယုံကြည်မှု WE စျေးကွက်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၌အမျိုးမျိုးသုံးထိုးနှက်မှိုထုတ်ကုန်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတစ်ဦးကဦးဆောင်လမ်းပြ Manufacturing နေကြတယ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထံမှလာသည်။
ထိုးနှက်ပုံသွင်း Solutions အဘို့အကြှနျုပျတို့ကိုကိုဆက်သွယ်ပါ။